महिलाले सवारी चलाउन पाउने भन्दै वकालत गर्दा जेल सजाय ! – Koshidaily
महिलाले सवारी चलाउन पाउने भन्दै वकालत गर्दा जेल सजाय !
access_alarms Koshi daily १४ पुष २०७७, मंगलवार ०१:३८	chat_bubble_outline 0	Comments
एजेन्सी, १४ पुस । साउदी अरबमा महिलाले पनि सवारी चलाउन पाउने भन्दै वकालत गरेकी एक अधिकारवादीलाई जेल सजाय ताेकिएकाे खुलासा भएकाे छ । साउदीकी एक प्रख्यात महिला अधिकारवादी लुजैना अल-हथलुललाई जेल सजाय सुनाइएको हाे । उनले महिलाहरूले पनि सवारी हाँक्न पाउनुपर्ने भन्दै अधिकारका लागि वकालत गरेकी थिइन् ।
बिबिसीका अनुसार ३१ वर्षकी हथलुलले हालसम्म साढे दुई वर्षभन्दा बढी जेल जीवन बिताइसकेकी छन् । उनीसहित केही अधिकारवादीहरूलाई साउदी अरबविरुद्ध रहेको ठानिएका संस्थाहरूसँग सम्पर्क गरेको आरोपमा सन् २०१८ मा पक्राउ गरिएको थियो ।
यस घटनालाइ गम्भीरताका साथ लिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पटक-पटक उनलाई रिहा गर्न माग गर्दै आएका छन् । तापनि साउदी सरकार रिहा गर्न तत्पर छैन । सोमवार आतङ्कवादविरुद्धको अदालतले राष्ट्रिय सुरक्षामा क्षति पुर्‍याउन खोजेको र देशमा विदेशी मुद्दाहरूलाई अघि बढाएको आरोपमा उनलाई दोषी ठहर गरेको छ । उक्त अदालतले ती महिलालाई ५ वर्ष आठ महिनाको जेल सजाय सुनाएको हो ।
यद्यपि हथलुल र उनको परिवारले भने सबै अभियोग अस्वीकार गरेका छन् । उनलाई जेलमा यातना दिइएको समेत परिवारको दाबी छ । पक्राउपछि उनलाई प्रशासनले ३ महिनासम्म सम्पर्कविहीन बनाएको र उनलाई करेन्ट लगाइनुका साथै कुटपिट गरिएको परिवारकाे आराेप छ । साथै उनी यौन उत्पीडनको सिकार भएको समेत परिवारले आरोप लगाएको छ ।